Ny mari-tsarin'ny ekipa NBA misy tarehintsoratra Disney | Famoronana an-tserasera
Iza no handeha milaza fa tsara be ny endrik'i Disney ho an'ny ekipa NBA tsirairay avy. Ary ny fahitana an'i Mickey Mouse miaraka amin'ny Boston Celtics, ilay ekipa lehibe an'i Larry Bird, Paroasy ary ny orinasa dia fotoana mahafinaritra.
Izy io dia mpamorona sary izay namorona a andian-dahatsoratry ny logo ekipa NBA hankalazana ny fiverenan'ny fanatanjahantena amin'ny Disney World ao Orlando, Florida. Inona no fomba tsara kokoa hankalazana miaraka amin'ity andiana logo mahafinaritra tsotra ity ity.
Una andiam-logo misy litera Disney izay samy manana ny asany ao aoriany mba hahafaly azy ireo. Izahay dia manana ny Chicago Bulls an'ny Michael Jordan lehibe, ny Washington Wizards ary ny Orlando Magic ho ohatra tsara amin'ny fomba fampiasana ireo endri-tsoratra Disney ireo hanoloana ireo biby fiompy nentin-drazana.
ny Los Angeles Lakers dia manasongadina ny Silhouette Mickey Mouse, ny Golden State Warriors miaraka amin'ny sary famantarana Disney World, na ny Charlotte Hornets miaraka amin'i Dumbo mahafatifaty ho an'ny andiam-logo maro an'isa amin'ireo ekipa NBA ireo.
Phoebe Williams dia nizara ny tsirairay tamin'izy ireo avy amin'ny Kaonty Instagram ka tsy ho diso anjara na inona na inona ianao ary afaka manaraka ny asany ho mpamorona endrika mihitsy aza. Nahavita nanentana ireo mpankafy maro aza izy hanao lobaka manokana misy ny tarehin-tsoratra Disney ary azon'ireo mpankafy ny ekipa NBA tsirairay avy ampiasaina.
Kofehy: @Disney x logo an'ny ekipa NBA?
- ESPN (@espn) Jolay 1, 2020
Mazava ho azy, tianay ity fomba famerenana fanatanjahantena mahavariana ity toy ny baskety izay ampiharina amin'ny NBA. Ary tsy ho sambany io Ny endri-tsoratra Disney dia nampiasaina tamin'ny tetikasa maro ary iza no efa nandalo an'ireto andalana ireto; manao ahoana ianao Saron-tava Disney izay efa ho latsaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ny mari-tsarin'ny ekipa NBA miaraka amin'ny tarehin-tsoratra Disney izay ho tianao tsirairay avy